Moe Kai: Happy career choice?
အင်း ကျမလဲ မျက်စိကိုမှိတ် ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် မေးခွန်းလေးမေး၊ ပြန်စဉ်းစားကြည့်မိတော့ “အင်းဟုတ်ပ ငါ့မှာ မနက်မိုးလင်းပြီ ဆိုတာနဲ. သြဒီနေ. ဘာတွေလုပ်ပြီး ဘယ်လူနာတွေ (ကိုယ့်လာ ဒုက္ခပေးဦးမလဲ? အဟဲ) နဲ. ကြုံရဦးမလဲ အမြဲ ရင်ခုန်တတ်ပါလား” ပြန်တွေးမိပါတယ်။ သြ သူကတော့ ပိုပြန်ရောကော ပြောရင်လဲ “အဟဲ ဘုရားစူး အမီး အမှန်ပြောရတာပါ” လို.ပဲ ပြန်ပြောရမှာပါဘဲ။ ကျမရဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ ဆေးရုံမှာ တောင်ပြောမိသေးတယ် “ငါဘဝကြီးက နင်တုို. ဘုိုတွေ ခေါ်တဲ့ Loser လို.တောင်ပြောရမလား မသိဘူး။ အလုပ်ကိုပဲမျှော်ပြီး ပျော်နေတယ်၊ တခြား အပျော်မရှိသလိုဘဲ” လို.။ သြ လှူဇာ လူဇာလေးရယ်ပေါ့ (Loser)
စာရေးဆရာပြောထားသလို အောင်မြင်မှုတွေ ငွေတွေ နောက်မှာ လိုက်လာမလား မလာလားတော့ မသိပါ။ အခုထိတော့ အဲဒါတွေ မတွေ.ရသေး၊ တခါတလေ ရတတ်တဲ့ လူနာတွေရဲ့ “ကျေးဇူး” ဆိုတာလေးတွေနဲ.တင် ကိုယ်ကိုယ်ရှေ.ဆက်နေရပါသေးတယ်။ ဘဝဆိုတာကလဲ မမျှော်မှန်းတာတွေ အလွန် ဖြစ်တတ်တာကိုး။ ဥပမာ သေင်္ကြာနေ.က ward sister ကြီးကပြောတယ်။ အီတာလီယန် (Italian) လူနာတယောက် ဆေးရုံဝန်ထမ်းတွေနဲ့ ပြဿနာဖြစ်ပြီး အလွန် ဒေါသထွက် သောင်းကျန်းနေတယ်တဲ့။ လာကူပေးပါတဲ့။ sister ကြီးက ပြောသေးတယ်။ အီတလီကဆိုတော့ အာကျယ်ကျယ်နဲ. ရိုင်းမှာပေါ့တဲ့ (အမ် အဲဒါတော့ မှန်သလား မှားသလား မီး မသိ)။ ဒီလိုနဲ. သူ.ရဲ့ ဝါးရင်းတုတ်စာရမလား အော်ဆဲတာ ခံရမလား တွေးပြီး အားမာန် အပြည့်နဲ. သွားလိုက်တာ သူနဲ. စကားနဲနဲပဲ ပြောလုိုက်ရတယ်၊ ဒီအီတလီကြီးက ကိုယ့်ကို အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုပြီး သူ.ရဲ့ အီတလီ စားသောက်ဆိုင်ကိုတောင် အတင်းလာပါဦး ဆိုပြီး ဖိတ်ခေါ်တာ ခံခဲ့ရပါတယ်။ (ရောက်သွားမှ ဈေး၂ဆချပြီး လက်စားခြေမလားတော့ မပြောတတ်)
တခါတလေတော့ ကိုယ့်ကိုယ် အားမရဖြစ်မိတိုင်း ကိုယ်ရှေ.လေးစားစရာ ဆရာကြီးတွေကို ကြည့်ပြီး တနေ. ငါလဲ အဲဒီလိုဖြစ်အောင် ကြိုးစားရဦးမယ် ဆိုပြီး ဘဝကို အားတင်း ရှေဆက်ရင်း ဆက်ရင်း ဟိုရောက်ဒီရောက် စာကိုတော့ ဒီမှာဘဲ ရပ်လုိုက်ပါတော့မယ်။